Carabey oo soo dhaweeyay baaqa Farmaajo, eedayna u jeediyey Xaaf
CADAADO, Soomaaliya - Madaxwayne ku xigeenka Galmudug oo qoraal jawaab u ah war kasoo baxay Madaxwayna maamulkaas, Axmed Ducaale Geelle [Xaaf], soo saarey ayaa wuxuu dowladda ka difaacey eedaymihii kaga yimid hogaamiyaha dowlad goboleedkaan khilaafku ragaadiyey.
Maxamed Xaashi Cabdi [Carabey] madaxwayne ku xigeenka Galmudug ayaa shaaca ka qaadey in garabkiisa ku sugan xarunta Baarlamaanka maamulkaan ee Cadaado uu soo dhawaynayo dadaalada ay wado Villa Soomaaliya, ayna diyaar uyihiin wadahadal.
Xaaf iyo garabkiisa oo dhinacooda ku sugan Dhuusamareeb xarunta dowlad goboleedkaan ayuu dusha ka saarey masuuliyadda khilaafka siyaasadeed ee uu maamulkaan dhex-dabaalanayo, iyo shaqaaqooyin dad ay wax ku noqdeen oo degaanka Dac-dheer dhowaan ka dhacey.
Xudunta murankaan siyaasadeed ayuu ku sheegay Carabey war-saxaafadeed uu soo saarey, fulinta heshiis ay ku midoobeen Ahlu Sunna iyo Galmudug, kaasi oo uu ka dhawaajiyey in loo marey dhaqan-gelintiisa wado aanan sax ahayn, sida uu hadalka udhigey.
Madaxwayne ku xigeenka ayaa gaashaanka ku dhuftey war kasoo yeeray Xaaf, kaasi oo ah inaanu jirin madax Galmudug ka tirsan oo is-khilaafsan, wuxuuna Carabey carabka ku adkeeyay inuu wali taagan yahay is-marin-waaga, xal aanan laga gaarin.
"Cawaaqib xumo walba oo ka dhalata khilaafka xoogan ee udhaxeeya hogaanka Galmudug waxaa masuuliyadeeda qaadayo kooxda fadhisa Dhuusamareeb," ayaa lagu yiri Bayaanka oo nuqul kamid ah uu arkey Warsidaha Garowe Online.
Ugu dambeyn, war-saxaafadeedka uu soo saarey Carabey wuxuu ugu baaqey dhamaan cid walba oo ku lug leh siyaasadda maamulkaan khilaafku la degay inay isha ku hayaan arrimaha kusoo kordhaya xaalada jahwareersan ee dowlad goboleedka Galmudug.
HALKAN KA AKHRI WAR SAXAAFADEEDKA:
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo "xilka qaadis" lagu sameeyay
Soomaliya 18.09.2018. 14:09